बैंक Archives - Page 146 of 155 - Chanakya Post
लक्ष्मी बैंकको १११ औं शाखा भैंसेपाटीमा सञ्चालन
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो १११औँ शाखा उपत्यकाकाे भैंसेपाटीमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको जनाएको छ । यस शाखाबाट ग्राहकले सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाको साथै लकर सेवा पनि प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । साथै बैंकले साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने […]
नेपाल बैंकको अधिकांश सूचकमा गिरावट, खुद नाफा १९ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६० करोड ३७ लाख रुपैयाँले घटेको छ। बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा २ अर्ब ६१ करोड १९ लाख नाफा कमाएको छ ।जुन गत वर्षको भन्दा […]
मुक्तिनाथ विकास बैंकले ल्यायो आकर्षक ब्याजदरमा आवास तथा सेयर कर्जा योजना
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले आकर्षक सुविधा र ब्याज दरमा आवास कर्जा तथा सेयर कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘आधाको ब्याज, आधाको किस्ता साथमा पाउनुहोस् नगद फिर्ता’ भन्ने मूल नाराका साथ बैंकले आवास कर्जा योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो। आवासीय प्रयोजनका लागि घर निर्माण, मर्मत, तला थप गर्न, कम्पाउण्ड लगाउन, घर फर्निसिङ […]
एभरेष्ट बैंकको नाफा ३ अर्ब ४ करोड, कति छ लाभांश क्षमता ?
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासीक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खुद मूनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत वर्ष भन्दा ४६ करोड बढी नाफा कमाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा […]
लक्ष्मी बैंक र एडीबीको ट्रेड फाइनान्सबीच सम्झौता
काठमाडौं। लक्ष्मी बैंक र एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) को ट्रेड फाइनान्स प्रोग्रामबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपालमा ऋण विस्तार गर्नका लागि सम्झौता भएको हो। एडिबिको ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम नेपालमा सन् २००९ देखि सञ्चालनमा छ।आजसम्म यस कार्यक्रमले २०० भन्दा बढी वित्तीय कारोबार गरिसकेको छ। यसबाट ८ करोड २० लाख अमेरिकी डलरको सहयोग प्राप्त […]
ज्योति विकास बैंक र आइएमई–पेबीच डिजिटल भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक र आइएमई–पेबीच डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नका लागि सम्झौता भएको छ । ग्राहकवर्गहरुलाई डिजिटल भुक्तानी सेवा अझ सहज बनाउनको लागि बैंकले आइएमई पेसँग सहकार्य गरेको हो। सम्झौता पत्रमा ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार ज्ञवाली र आइएमई पेका तर्फबाट डाइरेक्टर खिलेन्द्र पौड्यालले हस्ताक्षर गरे । […]
अझै २१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी, कुन प्रदेशमा कति ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं। देशभरका २१ वटा स्थानीय तहमा मात्र बैंकको शाखा पुग्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेका छन् । प्रदेश ५ का सबै १०९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसके पनि बाँकी ६ वटा प्रदेशका २१ तहमा शाखा […]
एसबीआई बैंकको नाफा २ अर्ब ३० करोड, वितरण योग्य नाफा कति ?
काठमाडौं । साउन लागेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यसैक्रममा नेपाल एसबीआई बैंकले पनि मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौंथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफा १३.८४% ले बढाएको छ । बैंकले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २ […]